काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। ओली समूह निकट प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलामा पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला भने स्वीकार गर्ने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास छ, जे निर्णय गर्छ, स्वीकार्छौं,’ पौडेलले भने, ‘संविधानमा संसद विघटन छैन भन्नु संविधानसँग मेल नखाने विषय हो।’ तर, अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने दलील पेश भइरहेको उनले बताए। सदनको बहुमतको समर्थन रहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना नहुने पौडेलको तर्क छ।
दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु संविधानसम्मत भएको उनको भनाइ छ। पुनर्स्थापना हुँदा पनि नयाँ सरकार संसद्ले दिन नसक्ने भएकाले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको पौडेलको भनाइ छ। आगामी निर्वाचनबाट ओली समूहको नेकपाले बहुमत ल्याउने दावी गरे।
उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने समेत दावी गरे। ‘निर्वाचन हुनका लागि के चाहिन्छ ? निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न सक्छु भनिरहेको छ,’ उनले भने। दलहरु निर्वाचनका लागि तयार भएको बताए। निर्वाचन कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ। जनताको बीचमा भय सिर्जना गर्नेले मात्रै निर्वाचन नहुने तर्क गरिरहेको टिप्पणी गरे।
पौडेलले अर्का समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालाई निर्वाचन विरोधी अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिए। ‘खबरदार! निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर निर्वाचनको माहोल बिगार्न पाइदैन। हामी वैशाखमै निर्वाचन गर्छौं,’ उनले चेतावनी दिँदै भने। पौडेलले कोभिड विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए।
पौडेलले भने, ‘हिजो हामीले निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउँछौ भन्दा केही मान्छे पत्याउदैन थिए। आज हामी राष्ट्रिय अभिभारा र निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाह गरिरहँदा गुणस्तरीय खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको छ र हामी त्यसबाट पछि हट्दैनौं।’